Ndị kpuru ìsì sunflowers: ihe osise dị egwu nke Agha Obodo Spanish | Akwụkwọ dị ugbu a
John Ortiz | 19/11/2021 17:25 | Emelitere ka 20/11/2021 02:18 | ọtụtụ
okporo ụzọ Madrid
Okooko osisi Sunflowers bụ akwụkwọ akụkọ nke onye ode akwụkwọ Madrid bụ Alberto Méndez. E bipụtara ya na Jenụwarị 2004 site na Editorial Anagrama. Ọrụ ahụ nwere akụkụ anọ dị mkpirikpi jikọtara ọnụ—nke ikpeazụ bụ nke na-enye aha ya aha—nke na-ewerekwa ọnọdụ n’ime afọ ndị agha obodo Spain gasịrị. N'afọ 2008, ewepụtara ihe nkiri homonymous na sinima, José Luis Cuerda duziri ya, ya na onye edemede ya na Rafael Azcona nwere edemede aka anọ.
Kemgbe mmalite ya, akwụkwọ ahụ ghọrọ ihe ịga nke ọma nbipụta. Ruo ụbọchị, ndekọ karịa 350 puku mbipụta rere. N'ụzọ dị mwute, onye edemede ahụ enweghị ike ịnweta nkwanye ùgwù maka ọrụ ya, n'ihi na ọ nwụrụ obere oge ka e bipụtara ya. N'ime ihe nrite enyere akwụkwọ ahụ, ihe ndị a pụtara: 2004 Castilian Narrative Criticism Award and 2005 National Narrative Award.
1 Nchịkọta nke Sunflower kpuru ìsì
1.1 Mmeri mbụ (1939): "Ọ bụrụ na obi chere na ọ ga-akwụsị ịkụ"
1.2 Mmeri nke abụọ (1940): "Ihe odide a chọtara na echefu echefu"
1.3 Mmeri nke atọ (1941): "Asụsụ nke ndị nwụrụ anwụ"
1.4 Mmeri nke anọ (1942): "The kpuru sunflowers"
3 Banyere onye odee, Alberto Méndez
Na nchikota nke Okooko osisi Sunflowers
Mmeri mbụ (1939): "Ọ bụrụ na obi chere na ọ ga-akwụsị ịkụ"
Onye isi Franco Carlos Alegría kpebiri —Mgbe ọtụtụ afọ nke ijesịrị ozi— pụọ n’agha ahụ nke a wụfuru nke ukwuu n'ọbara. Mgbe ọ gbasịrị arụkwaghịm, e jidere ya ma bo ya ebubo ịgba ọchịchị mgba okpuru. Mgbe a na-eme ya, ndị Republican nyefere onwe ha pụọ ​​​​n'ọgbọ agha.
O siri ike na ndị mba ahụ weghaara ọchịchị, A mara Alegría ikpe ọnwụ maka ihe ndị o mere n'oge agha ahụ. Mgbe oge ruru ka a gbaa égbè, e tinyere ya na ndị ibe ya n’ahụ́ ájá. Mgbe ha nwetasịrị amara n'isi, e liri ha n'ili.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Carlos tetara ma hụ ozugbo na mgbọ ahụ na-ata naanị ya ma ọ dụpughị isi ya. Ka o nwere ike, o jisiri ike si n’olulu ahụ pụta wee jee ije nke ukwuu ruo mgbe o rutere n’otu obodo ebe otu nwanyị napụtara ya. Mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị, Alegría kpebiri ịlaghachi n'obodo ya dị njikere ịkwado ikpe ziri ezi ọzọ, ebe ọ bụ na obi amamikpe ekweghị ya biri n'udo.
Osisi sunflower kpuru ìsì: 354 ...
Mmeri nke abụọ (1940): "Ihe odide a chọtara na echefu echefu"
Ndị ntorobịa abụọ -Eulalio na Elena. ha mere njem na France site na ugwu nke Asturias, ha gbapụrụ n’ọchịchị nke a manyere. Ọ dị ime ọnwa asatọ na ime ime wee pụta, na-amanye ha ịkwụsị. Mgbe ọtụtụ awa mgbu gasịrị, nwa agbọghọ ahụ mụrụ nwa nye otu nwata nwoke ha kpọrọ Rafael. Ọ dị nwute Elena ọ nwụrụ y Eulalio nọ naanị ya na ihe e kere eke.
Okwu nke Alberto Méndez
Onye na-ede uri, ka ọnwụ enyi ya nwanyị na-awụ akpata oyi n'ahụ. a wakporo ya site na oke obi amamikpe. O werekwa iwe n’ihi na ọ maghị ihe ọ ga-eme Rafael, bụ́ onye na-akwụsịghị ibe ákwá ruo ọtụtụ awa. Otú ọ dị, nwa okorobịa ahụ ji nwayọọ nwayọọ malite ilekọta nwa ya nwoke ma were ilekọta ya anya dị ka nanị ozi ya ná ndụ. N'oge na-adịghị anya ka e mesịrị, Eulalio chọtara ụlọ a gbahapụrụ agbahapụ ma kpebie iburu ya dị ka ebe mgbaba.
Mgbe ọ bụla o nwere ike, nwata ahụ na-apụ ịchọ nri. Otu ụbọchị, o jisiri ike zuuru ehi abụọ, bụ́ ndị ọ zụchara obere oge. Ma, Mgbe oyi rutere, ihe niile malitere mgbagwoju anya na ọnwụ nke abụọ dị nso. A kọrọ akụkọ a n’ime onye mbụ, ewepụtara ya site n’akwụkwọ ndekọta nke otu onye ọzụzụ atụrụ tinyere ozu mmadụ abụọ na otu ehi nwụrụ anwụ n’oge opupu ihe ubi nke 1940.
Mmeri nke atọ (1941): "Asụsụ nke ndị nwụrụ anwụ"
Akụkọ nke atọ na-akọ akụkọ banyere Juan Senra, a onye ọrụ gọọmentị na a tụrụ ya mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ ndị Francoist. Nwoke ahụ jisiri ike nọrọ ndụ n'ihi na ọ maara banyere nwa Colonel Eymar — Onye isi oche nke ụlọ ikpe. Senra nwetara ozi a na mbụ, ebe ya na Miguel Eymar lụrụ ọgụ. Iji mee ka njedebe ya dịkwuo ogologo, isiokwu ahụ na-agha ụgha kwa ụbọchị, na-azọrọ na nwa okorobịa ahụ bụ dike, mgbe, n'ezie, ọ bụ onye na-efu efu.
N'oge ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, Juan mere enyi na otu nwa okorobịa aha ya bụ Eugenio, ya na Carlos Alegría dịkwa n'otu. Maka Senra, ọ bịara na-esiwanye ike ịnọgide na-agha ụgha. N'otu aka ahụ, m maara na m ga-anwụ, n'ihi na ahụ ya adịghị n'ọnọdụ kasị mma.
Mgbe ihe niile enweghị ike iyi ka ọ na-akawanye njọ, ihe abụọ mere nke dọwara Senra ma kpebie ihe ga-eme ya: Captain Joy kpebiri igbu onwe ya, na ụbọchị ole na ole gara aga, A mara Eugenio ikpe ọnwụ. Mmetụta dị ukwuu, Juan họọrọ ikwupụta eziokwu banyere Miguel, ihe ọ gụnyere al ịtụ gị agbapụ ụbọchị mgbe.
Mmeri nke anọ (1942): "The kpuru sunflowers"
Edemede ikpeazụ a na-akọ akụkọ banyere Ricardo: onye Republican, lụrụ Elena na nna nke ụmụ abụọ - Elena na Lorenzo. Onye ọ bụla n'ime obodo ha chere na ọ nwụọla, ya mere nwoke ahụ, na-eji ọnọdụ ndị ahụ eme ihe. kpebiri na ya ga-ezobe n’ụlọ nke ya ya na nwunye ya na obere nwa ya nwoke. Ha amaghị ihe ọ bụla banyere nwa ha nwanyị, ma e wezụga na o soro enyi ya nwoke gbagara ịchọ ihe ka mma, n'ihi na ọ tụrụ ime.
Ezinụlọ ahụ mere usoro ihe omume siri ike ka onye ọ bụla ghara ịhụ na Ricardo ka dị ndụ. Salvador -diacon obodo na onye nkuzi Lorenzo— dara obsessively ịhụnanya na Elena, ruo n’ókè nke na-amaja ya mgbe ọ bụla ọ hụrụ ya. Kedu ka ihe niile nwere ike isi gbagwojuru anya Ricardo mere mkpebi: gbaga Morocco. Ha si ebe ahụ malite ire ụfọdụ ngwá ụlọ.
Mgbe ihe niile fọrọ nke nta ka ọ dị njikere Salvador batara n'ụlọ na ngọpụ nke mkpa ka ya na nwa nwoke ahụ kwurịta okwu. Mgbe nlekọta Lorenzo gasịrị, dikọn ahụ wakporo Elena, nke mere ka Ricardo pụta ịgbachitere nwunye ya. Mgbe e kpughere ya, onye nkụzi ahụ gbasaa ozi ahụ na ọnwụ nwoke ahụ bụ ụgha jọgburu onwe ya na ụjọ, na-eme ka nna ezinụlọ ewere ara wee gbuo onwe ya.
Okooko osisi Sunflowers ọ bụ akwụkwọ nke mkpirisi akụkọ e debere na Agha Obodo Spanish. Ederede ahụ nwere ibe 160 kewara n'ime isi anọ. Akụkụ nke ọ bụla na-akọ akụkọ dị iche iche, mana ha na-ejikọta ibe ha; ihe omume ndị mere n'ime afọ anọ (n'etiti 1939 na 1942). Onye edemede ahụ chọrọ ịtụgharị uche na akụkụ nke nsonaazụ ndị bi na-ata ahụhụ n'oge na mgbe esemokwu ahụ gasịrị.
Banyere onye odee, Alberto Méndez
A mụrụ Alberto Méndez Borra na Madrid na Wednesde Ọgọst 27, 1941. Ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị na Rome. Ọ laghachiri n'obodo ya ka ọ mụọ Philosophy na Letter na Mahadum Complutense nke Madrid. E nwetara akara ugo mmụta bachelor a n'aka ya maka ịbụ onye ndu ụmụ akwụkwọ na isonye na ihe ngosi 1964.
Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye edemede na ụlọ ọrụ dị mkpa, dị ka Ndị Punxes y Montera. Ọzọkwa, na 70s, ọ bụ onye nchoputa nke ụlọ obibi akwụkwọ Ciencia Nueva. Na 63 o bipụtara akwụkwọ mbụ ya na naanị ya: Okooko osisi Sunflowers (2004), ọrụ natara onyinye n'otu afọ ahụ Setenil maka akwụkwọ akụkọ kacha mma.
N'oge ngosi nke Okooko osisi sunflower kpuru (2004) na Circulo de Bellas Artes, Jorge Herralde - onye nchịkọta akụkọ Ihe osise- rụrụ ụka na-esonụ banyere ọrụ: «Ọ bụ ngụkọ nwere ebe nchekwa, akwụkwọ megidere ịgbachi nkịtị mgbe agha gasịrị, megide nchefu, na-akwado eziokwu akụkọ ihe mere eme eweghachiri ma n'otu oge ahụ, dị oke mkpa na nke siri ike, nzute na eziokwu agụmagụ".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Okooko osisi Sunflowers